Faah faahin:- Dagaal ka dhacay deegaanka Kudhaa oo lagu dilay sarkaal ka tirsan Al-shabaab – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Dagaal ka dhacay deegaanka Kudhaa oo lagu dilay sarkaal ka tirsan Al-shabaab
Sarkaal ka tirsanaa Xarakada Al-shabaab ayaa la sheegayaa in maanta lagu dilay dagaal deegaanka Kudhaa ee gobolka J/hoose ku dhexmaray ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya oo garab ka helaaya kuwa AMISOM iyo dagaalyahanada Al-shabaab.
Dagaalkaasi ayaa la sheegayaa inuu ku bilawday weerar ay dagaalyahanada Al-shabaab kusoo qaadeen xero ay ku sugnaayeen ciidanka dowladda Soomaaliya ee ku taalla deegaanka Kudhaa ee gobolka J/hoose.
Weerarkaasi ayaa markii dambe isku badalay dagaal fool ka fool ah oo u dhaxeeyay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo garab ka helaaya kuwa AMISOM iyo dagaalyahanadda Al-shabaab, waxayna labada dhinac isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan.
Saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Kenya ee ku sugan deegaanka Kudhaa ayaa warbaahinta u sheegay in dagaalkaasi ay ku dileen sarkaal sare oo ka tirsanaa Xarakada Al-shabaab oo lagu magacaabo Baashe Nuur Xasan iyo sidoo kale mid ka mid ah dagaalyahanadda Al-shabaab ee iyaga weerarka kusoo qaaday.
Illaa iyo haatan ma jiro wax hadal ah oo kasoo baxay saraakiisha ka tirsan Xarakada Al-shabaab, kaas oo ay uga hadlayaan dilka loo geystay sarkaalka iyaga ka tirsanaa ee la dilay iyo mid ka mid ah dagaalyahanadooda.
Sidoo kale, ma jiro warar madax banaan kale oo xaqiijinaya dilka labadaasi qof ee ka tirsanaa Al-shabaab, marka laga reebo sheegashada saraakiisha dowladda iyo kuwa AMISOM.